Global Voices teny Malagasy » Kiobà sy Etazonia: “Tonga Ny Andro Maharavo” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Janoary 2015 5:06 GMT 1	 · Mpanoratra Elaine Díaz Nandika (en) i Marianna Breytman, avylavitra
Sokajy: Amerika Latina, Karaiba, Kiobà, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Tsara
Ny 17 Desambra, namerina ny fifandraisana diplaomatika teo aminy i Kiobà sy Etazonia. Fampiasàna sary nahazoana alàlana tamin'ny bilaogy Letra Nueva.
Ny 17 Desambra, fony ny filohan'i Kiobà sy Etazonia nanao fanambaràna niaraka  momba ny fanombohan'ny fampanaraham-penitra ny fifandraisana eo amin'ny firenena roa tonta, Kiobàna marobe mpampiasa tambajotra no nizara ny tonony avy amin'ilay hira “The Happy Day That Is Coming”  – Ilay Andro Maharavo ho Tonga. Tamin'ny 1974, taona folo mahery taorian'ny nahatapahan'ny fifandraisana diplaomatika teo amin'i Kiobà sy Etazonia, nosoratan'ilay Kiobàna mpanoratra tononkira no sady mpihira, Silvio Rodríguez, ny : “Miàla any ny andro midanika / arahan'ny androm-pahagagàna / vorona iray manatona tsy misy tahotra / mibarareokam-pifaliana noho ny fofo-manitrao / miha-manakaiky ny mamanàla.”
Na eo aza ny fifandirana politika eo amin'ny firenena roa tonta, ny “mamanàla” nolazain'i Silvio Rodríguez no namintina tamin'ny fomba tsy hay hazavaina ny toe-pon'ireo Kiobàna maro, na izany ho an'ireo miaina ao amin'ny nosy, na ho an'ireo efa ho roa tapitrisa miparitaka eran'izao tontolo izao noho ny antony pôlitika sy toekarena.
Raha hadisoam-panantenana ho an'ireo Kiobàna any Miami no taratra any anaty fandrakofana maro nataon'ny mpampahalàla vaovao, ary ahiahy avy amin'ireo mpitarika ny fanoherana avy ao an-toerana mikasika ny ho fiantraikan'ny fifandraisana vao avy navaozina, eo amin'ny zon'olombelona ao amin'ny nosy, tsy hoe ireo ihany akory no lohahevitra nipoitra teny anivon'ny adihevitra tanaty aterineto mikasika ilay fiovàna ara-pôlitika.
Ny fifindrà-monina no nanamarika ny tantara Kiobàna hatramin'ny revôlisiôna tamin'ny 1959. Ny Aprly 2011, tanora iray bilaogera, mpanao gazety, ary mpampianatra any amin'ny anjerimanontolon'i Havana no nizara  tao amin'ny bilaoginy, El aguacero fa : “mandao an'i Kiobà ireo namana tsy foy.” Indray andro dia hoy ny namany mantsy azy, “maty izay olona miàla.”
Ny fahatsapàna ho very, ho mikorontana nateraky ny fifindrà-monina, no lohahevitra tena niverimberina tao amin'ny tontolon'ny bilaogy Kiobàna: “Miaraka amin'ny fotoana, vitako ihany ny nahatakatra ny fomba nahatapaka ny fatorana ary dia mitohy feno tsy fanajàna ny fiainana ka lasa dia lasa ary lasa mandeha miàla ny olona,” hoy ilay bilaogera.
Saingy ny 17 Desambra koa dia niteraka fihetsehampo firavoravoana sy fifanakaikezana, izay nitondra ny rehetra hitambatra niaraka tamin’ilay fehezanteny hoe , “Aorian'ny androany, tsy ho toy izao intsony ny zavatra rehetra.”
Efa elabe talohan'ny nampiharana ireo dingana voalohany tamin'ilay tondrozotra nofaritan'ny Trano Fotsy  ho “famitranam-pihavanana sy fanomezana hery ny vahoaka Kiobàna,” no efa nitranga ny tena fiovàna fototra, araka ny lazain'i Carlos Manuel Álvarez , Kiobàna mpanao gazety “tao anatin'ny saintsika.” hoy i Álvarez :
Tsy miatrika tranga iray hoe hanitsy fotsiny ny tena zava-misy ara-toekarena, kolontsaina sy sosialy aty amintsika isika, izay efa ampy, fa tranga iray izay hanery antsika hanavao ny fitenintsika, ireo teny izay mora tamintsika ny nampiasa azy, ny fomba niheverantsika sy nandraisantsika ny tenantsika rahateo ho vahoaka iray.
Kisary mahatsikaiky nalefa tao amin'ny tambajotra sosialy, mikatsaka ny hanova ny lahateny ôfisialy Kiobàna. Nahazoana alàlana tamin'ny bilaogy Nedra cubana ny fakàna azy.
Misy zavatra tsy dia mampilamin-tsaina loatra ihany koa miaraka amin'ity fanavaozana ity, izay amin'ny tranga sasany dia miseho amin'ny alàlan'ny kisary mahatsikaiky mampihomehy izay manafotra ireo tambajotra sôsialy, ary, amin'ny tranga hafa, amin'ny alàlan'ny fanontaniana mitodika amin'ny hoavy. “Inona no mitranga raha tsy maintsy hiatrika ‘fahavalo’ ianao mandritry ny androm-piainao manontolo, ary tampoka teo nitsahatra ny tsy ho ‘fahavalonao’ intsony ry zareo?” hoy i Sabdiel Batista .
Araka ny filazan'i Álvarez:
[voalohany indrindra] tsy maintsy hanohy hitantana ny fahaleovantenantsika isika, nefa ankehitriny miaraka amin'ny fisian'ny Amerikàna ao anatin'ny fitantànana (izay, ho fanampin'ny efa tsy azo ialàna, dia mbola hahatonga ny fiarahana ho sarotsarotra sy mahaliana ary mitarika amin'ilay hany fanontaniana izay tena afaka handrefesana antsika ho vahoaka iray, ary na dia efa nivonona tamin'izany aza isika, na eo aza ny zavatra rehetra)
Ao anatin'ny fiovàn'ny fiainana ao Kiobà, izay mitranga amin'izao fotoana izao, dia hoy i Rafael González  manampy hoe :
…tsy mantsy handray anjara isika olom-pirenena Kiobàna (…) tsy ho mpitazana fotsiny ihany, fa ho toy ireo (…) izay mbola ho eto hiatrika hirifiry sy hankafy ny zava-misy izay tsy sahiko saintsainina akory aza amin'izao fotoana izao.
Ao anatin'ity vondron'olom-pirenena ity, hanomboka tsy maintsy havitrika amin'ny hampandraisana anjara ireo Kiobàna monina any ivelany i Kiobà, izay ny vola alefan-dry zareo no mandrafitra ny loharanom-bola faharoa lehibe indrindra ho an'ny firenena. Avy any Alta Gracias ao Arzantina, Alberto Manuel Pacheco  milaza ny filàna mampiakatra ny haavon'ny fandeferana ara-pôlitika sy ny fampandraisana anjara ny hafa. “Maniry hahita tanindrazana sambatra sy miroborobo isika, toerana antonona antsika na dia miaina any aminà firenana 200 aza,” hoy izy. Ampiany hoe :
Fantatro fa toy ny hoe tsy ampy fahamatorana izany aho nefa farafaharatsiny dia ity (…) leo ny Kiobàna mamaky mikasika ny fanilihana, ireo mpanaraka an'i Castro, ry be dehaka, ny mpanohitra, ary ny fifanaovana taimbava. Manomboka anio, ho Kiobàna tsotra izao fotsiny ianao. Tsy olana na avy amin'ny elatra farany havanana na havia na ry Baroa isany, fa samy manana anjara andraikitra sy toerana daholo isika rehetra noho ny zo voajanahary eto amin'ity antsointsika hoe firenena ity. Ho sarotra tratrarina izany, saingy miaraka amin'ny dingana voalohany natao dia hanjary ho akaikikaiky kokoa ny ampitso.
Ny toetoetry ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny governemanta roa tonta no hametraka ny vatofototra mba “hahafahantsika miaina anay fandriampahalemna araka ny maha-mpiray vodirindrina antsika, ary ho amin'ny fifanajàn'ny andaniny sy ny ankilany sy ny fankasitrahana avy amin'ny vahoaka ho an'ny vahoaka, mba hampisy lanja ny fahasamihafàna izay tsy isalasalàna fa ananantsika tokoa (…) Tonga ny andro iray maharavo,” hoy i Silvio Rodríguez mamintina azy ao amin'ny bilaoginy .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/01/03/66918/
 nanao fanambaràna niaraka: https://globalvoicesonline.org/2014/12/17/castro-and-obama-open-new-chapter-on-us-cuba-relations/
 “The Happy Day That Is Coming”: http://www.cancioneros.com/nc/480/0/el-dia-feliz-que-esta-llegando-silvio-rodriguez
 El aguacero fa: https://elaguacero.wordpress.com/
 ilay fehezanteny hoe: http://eltoque.com/content/el-principio-del-fin-del-bloqueo-cuba
 dingana voalohany tamin'ilay tondrozotra nofaritan'ny Trano Fotsy: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/12/17/hoja-informativa-un-nuevo-rumbo-para-cuba
 araka ny lazain'i Carlos Manuel Álvarez: http://elmalpensante.com/articulo/3242/la_tribu_que_entierra_su_dialecto
 kisary mahatsikaiky mampihomehy izay manafotra ireo tambajotra sôsialy, : http://negracubanateniaqueser.com/2014/12/23/cuba-eeuu-veintidos-memes-de-un-recuentro/
 hoy i Sabdiel Batista: http://letranueva.wordpress.com/2014/12/18/las-preguntas-de-muchos-cubanos-hoy/
 Rafael González: https://elmicrowave.wordpress.com/2014/12/17/el-principio-del-fin/
 Avy any Alta Gracias ao Arzantina, Alberto Manuel Pacheco: http://supercuba.wordpress.com/2014/05/06/paz-cojones/
 hoy i Silvio Rodríguez mamintina azy ao amin'ny bilaoginy: http://segundacita.blogspot.com/2014/12/bienvenidos-los-5-heroes-del-pueblo.html